Accueil > Gazetin'ny nosy > Tontolon’ny fandraharahana: Tenin’ny mpitari-bato vilam-bava ny an’Ingahy Filoha
Tontolon’ny fandraharahana: Tenin’ny mpitari-bato vilam-bava ny an’Ingahy Filoha
Ny sehatry ny fandraharahana ara-toekarena sy ny fampiasam-bola no nivoitra tao anatin’ny fandaharana « Fotoam-bita » fanaon’ny filohampirenena Rajaonarimampianina isakerinandro tamin’ity. Nitondra fanazavana sy famelabelarana ary fampitsiriritana isan-karazany tao izy.
Isan’izany ny hoe « ampitoviana ny rehetra eo anoloan’ny lalàna », sy ny hoe « tsy maintsy irosoana ny fanadiovana ankapobeny eo anivon’ny fandraharahana ara-toekarena ».
Marin-doatra izany satria azo ambara fa ny sehatry ny fandraharahana ara-toekarena no isan’ny sehatra tena anjakan’ny kolikoly avo lenta. Araka ny tenin’ny praiminisitra teo aloha, ny Me Ravony tamin’ny fotoanandro hoe « ny mpitondra fanjakana hatrany no iantefan’ny fanakianana sy fitsikerana avy amin’ny maro momba ny afera isan-karazany fa ny mpandraharaha ara-toekarena mpanao afera ange no tena misitraka ny 80%-n’ireny afera maloto ireny fa 20% monja no lasa any amin’ny mpitondra, amin’ny fanomezana ny tsena na « marché » e !, sy ny maro… » Mazava ny amin’iny na tsy itondrana famelabelarana amin’ny antsipirihany eto aza.
Ka tao anatin’ny fanazavana nataon’ny filoha Rajaonarimampianina dia isan’ny fampanantenana nataony koa ny hoe « ahena ny haba ho amin’ny fanafarana an’ireo fitaovana sy kojakoja famokarana herin’aratra azo havaozina ». Izany no hatao, hoy izy, dia mba hiantohana ny fampahombiazana ny dingana eo amin’ny antsoina hoe « tetezamita ara-angovo ».
Navoitrany koa ny fampirisihana ny mpampiasa vola mba hisehatra amin’ny tontolo eny ambanivohitra, toy ny fambolena sy fiompiana. Tsy nohadinoiny mantsy ny nanipika fa « i Madagasikara dia manana ny tanjany mba hizakany tena ara-tsakafo, ary maro amin’ireo mpampiasa vola vahiny no vonona hanangana seha-pihariana momba izany eto ».
Notsindriany anefa fa « mitaky antoka mba hanana fitonian-tsaina ara-pihariana eto ny mpampiasa vola, na vahiny na teratany, amin’izany, ary tafiditra ao anatin’izany ny fampitoviana lenta sy zo ny rehetra eo amin’ny sehatry ny fandraharahana. »
Fampanantenana miendrika fampielezan-kevitra politika ihany izany rehetra izany fa ny zava-nisy teto amin’ny tany sy ny fanjakana tao anatin’izay efa-taona izay dia ahafahana mino na tsia ny teny nataon’ny filoha tamin’ity faran’ny herinandro ity.
Nanjaka ange ny kolikoly avo lenta teto e ! Isan’ny nanaporofo ny tenin’ny Praiminisitra teo aloha, ny Me Ravony, ny zava-nisy momba ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ohatra. Dia mbola sahy hiteny indray ve ny filoha Rajaonarimampianina fa « nampitovy zo sy lenta ny mpandraharaha ara-toekarena raha ny tombon-dahiny manokana nomena an-dRazaimamonjy Claudine fotsiny no asian-teny ? » Dia mbola sahy hilaza koa ve ny filohampirenena fa « manome antoka ho amin’ny fitoniana sy fahamarinan-toeran’ny fampiasana vola eto ny fihetsiky ny manam-pahefana sasany izay manery mivantana na ankolaka ny mpandraharaha ara-toekarena eto ho tsy maintsy mamatsy vola azy satria misy raharaha « politika maloto » ataony ? Ny kolikoly avo lenta eny amin’ny fampidirana sy famoahana entana eny amin’ny fadin-tseranana koa dia isan’ny famotehana ny toekarem-pirenena. Tsy ny kojakoja sy fitaovana enti-mamokatra angovo azo havaozina ihany no tokony hijerena fepetra manokana amin’ny tontolon’ny haba fa ireo akora sy fitaovana miantoka ny fananganana orin’asa sy fampihodinana ny orin’asa eto an-toerana koa dia toraka izany, izay mifanindran-dalana amin’ny fampiakarana ny haban-tseranana amin’ireo entana efa voahodina avy any ivelany miditra eto nefa isika eto efa mamokatra azy ireny.
Ny famotehana ny fandraharahana ara-toekarena eto, indrindra fa ny any ambanivohitra amin’ny tsy fahavitan’ny fanjakana miantoka ny fandriampahalemana dia sakana goavana, fa na ny malagasy ihany aza no misehatra amin’io fambolena sy fiompiana io ka voaantoka ny fepetra takian’izany dia azo antenaina ny ampahany betsaka amin’ny tanjona.
Mampalahelo moa fa saika nifantoka tany amin’ny valim-botana na fanazavana momba ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana tamin’ny orin’asa AAA (Tiko)-n-dRavalomanana ny tena tanjon’Ingahy Filohampirenena tamin’io resaka fampiasam-bola sy sehatry ny fandraharahana ara-toekarena io.
Mbola isan’ny endrika isehoan’ny famotehana ny firenena koa ange, eo amin’ny sehatry ny fandraisana ireny mpampiasa vola avy any ivelany ireny ny fanomezana alalana azy ireny handroba ny harem-pirenena eto nefa tsy misy ampahafirin’ny harena robain-dry zareo eto no miditra ho fanoitran’ny fanasoavana ny firenena sy ny vahoaka e ! Na andramena na vatosoa na volamena na fasimainty sy ny hafa.
Ndeha hanokafana ady hevitra malalaka ity sehatra ity dia anaovana loa-bary an-dasy ho fantatry ny vahoaka amin’ny ankapobeny e ! Hatreto mantsy dia karazan’ny tenin’ny mpitari-bato vilam-bava ihany ny an’Ingahy filoha.